Autotarget: Inzira yekushambadzira Injini yeemail | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 17, 2008 Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Douglas Karr
Dhatabhesi kushambadzira ndezve nezve kunongedza maitiro, huwandu hwevanhu uye kuita fungidziro analytics pane ako tarisiro kuitira kuti uvashambadzi kwavari zvine hungwaru. Ini chaizvo ndakanyora chirongwa cheyakagadzirwa makore mashoma apfuura kuhuwandu chibozwa email vanyoreri zvinoenderana nemaitiro avo. Izvi zvaizobvumidza mushambadzi kuti aparadzanise huwandu hwevanonyorera zvichibva nekuti ndiani ainyanya kushanda.
Nekunongedza maitiro, vatengesi vanogona kudzikisira mameseji, kana kuyedza mameseji akasiyana, kune avo vanyori vasina kuvhura, kubaya-kuburikidza, kana kutenga (kutendeuka) kubva kuemail. Izvo zvakare zvaizobvumidza vashambadziri kuti vapewo mubairo uye zvirinani kunangisa kune avo vanonyanya kushandira kunyoresa. Icho chimiro hachina kumbobvumidzwa kuti chiite icho chigadzirwa pamwe nekambani iyoyo, asi imwe kambani yakakwira kune ino nhanho yedhatabhesi yekushambadzira uye sekisheni kusanzwisisika, iPost.
iPost yakaparura yakasimba kwazvo maitiro ekutarisa injini kune yayo line-up, inonzi AutoTargetTM (tinya kuti uwedzere mufananidzo):
Craig Kerr, iPost's VP yeKushambadzira, yakapa irinotevera ruzivo maererano nechigadzirwa:
iPost's Autotarget inobvumira vatengesi kuvandudza zvakanyanya email kushambadzira mhedzisiro vachishandisa kufungidzira analytics. Kushandiswa kwe Autotarget kwakaratidzirwa kuwedzera kubatsirwa kwemakambani eemail neinosvika makumi maviri muzana uye kudzikira zvakanyanya pamitengo yemitero uye kuwedzera mitengo yakavhurika.
Imwe kambani, semuenzaniso, yakawedzera email kushambadzira purofiti ne28%, yakadzora mitengo, kunyangwe mumusika uyu wakaomarara, ne40% uye yakawedzera mitengo yakavhurika ne90% mushure memwedzi mishoma yekushandisa Autotarget. Autotarget inobvisa fungidziro uye inoitsiva neyakavhurika, nzira yekushandisa iyo inosimbisa kuti iyo chaiyo email inotumirwa kune akakodzera munhu panguva yakakodzera.
Vazhinji vatengesi veemail vanozvirumbidza nekuwanda kwavakaita yavo email rondedzero. Uye ivo vane, pachinyakare, vanongoputira kazhinji sezvavanogona kune vanhu vazhinji pane email email chinyorwa sezvinobvira. Maitiro aya kutambisa zviwanikwa uye nzira yechokwadi yekurasikirwa nevatengi: Nepo vamwe vatengi vachida kugamuchira maemail ekutengeserana anowanzoitika, vamwe vanokurumidza kuuya kuzotarisa maemail se spam uye anotumira se spammer.
Autotarget yakasarudzika yekufungidzira analytic tekinoroji inoita basa rakaomarara kune vashambadzi nekungoereketa vachishandisa ruzivo rwavakatounganidza nezvevatengi? hunhu munzira dzavo dzese. Uye, nyowani neshanduro yavo yazvino, Autotarget inoshanda nechero email mupi webasa (ESP).
Mashandiro anoita Autotarget
Autotarget inotungamirwa nehova mbiri dze data: kutanga, email tinya nepakati uye tinya maitiro ekuona uye, chechipiri, muchinjiko-chiteshi wekutenga maitiro. Autotarget otomatiki uye inoramba ichitsvaga email kudzvanya uye kuona maitiro ehunhu zvakananga kubva kune yekambani yazvino email sevhisi.
Nhoroondo yevatengi maitiro ehunhu inozoita inoitika data
Autotarget inowana yezuva nezuva email mhinduro dhata uye inoratidzika kuratidza kusvika 125 vatengi manas pamwe nemwedzi gumi nembiri? trailing dhata pane yavo email mushandirapamwe hunhu. Kamwe kana aya manas agadzikiswa, Autotarget inogona kukurumidza kutumira yakanangwa mameseji eemail kune vanyoreri zvichibva pane avo chaiwo maitiro, kugadzirisa mukana wemhinduro yakanaka.
Inoshandisa nzira dzakatsigirwa kusanganisira kuongorora kweRFM
Chinhu chakakosha chechikwata chevanhu ndechekuongorora kweRFM (Recency yekudyidzana kwekupedzisira, Kakawanda kwekudyidzana, uye Kukosha kwemari kwemutengi). Autotarget ndiyo yekutanga email mhinduro yekugadzirisa uye kugadzirisa RFM ongororo yepamhepo email kushambadzira mishandirapamwe.
Kuongorora kweRFM kunoshandiswa zvakanyanya pasirese nyika kupatsanura vatengi muzvikwata zvichienderana nemaitiro avo kune mamwe mameseji. Iko kukosha kweRFM kuongororwa ndekwekuti zvakave zvichiratidzwa kwemakumi emakore kunyatso kufanotaura hunhu hweramangwana hwevatengi zvichibva pamafambiro avo ekare munzira dzakawanda uye pane hunhu hwevamwe vatengi vane mamwe ma profiles
Izvo masero eRFM anokuudza iwe nezve kushambadza uye kudzikisira
Intuitively, vatengi vane akakwirira eRFM maseru anokoshesa zvakanyanya kuita nechiratidzo, uye vanogona kupindura kuchipo uye vanoda zvakaderera, zvishoma kana, pamwe, pasina zvidzikiso. iPost's Autotarget RFM graph inoratidza chaizvo kuti vangani vatengi paRMM cell chaiyo vakapindura (iyo yakadzvanywa, kutariswa, uye kutengwa) kune chero seti yetsamba dzakasarudzwa. Wakashongedzerwa neiyi data, vatengesi vanogona kukurumidza uye nyore kugadzira zvikamu zvevatengi zvinoenderana neRFM yavo yekupindura maseru kuitira inoshanda yekutevera-kushambadzira.
Autotarget inotora maminetsi mashanu kuti ushandise
Hapana ongororo kana mafomu anodikanwa, zvakadaro 100% yenzvimbo yekunyorera yakaiswa neAutotarget. Vatengi vanogadzira data pese pavanosangana nemeseji yeemail kana kutenga chero nzvimbo yekubata (webhusaiti, POS, kana kufona nzvimbo). Muchidimbu, Autotarget ine simba, asi inokurumidza uye nyore kushandisa, mhinduro.
Tags: autotargetcraig kerrmaitiro evatengiemail inotarisamaitikiroiposttichimhanyakudzokororarfmrfm kuongorora